कपिलवस्तुको तीन पालिकाको मतगणना मध्यरातबाट सुरु « Mayadevi Online News Portal
कपिलवस्तुको तीन पालिकाको मतगणना मध्यरातबाट सुरु
३१ बैशाख २०७९ शनिबार ००:००
कपिलवस्तुको तीन पालिकाको मतगणना सुरु भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रबार सम्पन्न मतदान पश्चात मध्यरातबाट जिल्लाको तीन पालिकाको मतगणना सुरु भएको हो । हाम्रा सहकर्मीले जनाए अनुसार जिल्लाको शिवराज नगरपालिका, विजयनगर गाउँपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकाको मतगणना सुरु भएको छ ।
शिवराज नगरपालिकामा वडा नं. १ बाट मतगणना सुरु भएको छ । विहान ५ बजेको पछिल्लो जानकारी अनुसार २ सय मत गणना गर्दा ७४ मत पाएर राप्रपाका उम्मेद्वार अगाडी देखिएका छन् । यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले ६६ मत ल्याएर राप्रपाका उम्मेद्वारलाई पछ्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले १० मत ल्याउँदा जसपाका उम्मेद्वारले पनि १० मत ल्याएका छन् ।
गठबन्धनले ३, लोसपाले ३ र स्वतन्त्रले ४ मत पाएका छन् । यता विजयनगर गाउँपालिका वडा नं. १ बाट मतगणना सुरु भएको छ । जसमा अहिलेसम्म ३ सय ६९ मत गणना भएको छ । जस मध्ये नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले १ सय ८४ मतका साथ अग्रता लिइरहेका छन् ।
जसपाका उम्मेद्वारले ८८ मत ल्याउँदा कांग्रेसका उम्मेद्वारले ८८ मत पाएका छन् । यता जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित कपिलवस्तु नगरपालिकाको पनि गत गणना गएराति ११ बजेबाट सुरु भएको छ । हालसम्म कति मत गणना भयो अझै एकिन सार्वजनिक हुन सकेको छैन् । स्रोतका अनुसार विहान ५ बजेसम्मको नतिजा अनुसार त्यहाँ जसपाका उम्मेद्वार अगाडी देखिएका छन् ।
यता वाणगंगा नगरपालिकाको मतगणना आज विहान मात्र सुरु हुने भएको छ । गएराति सर्वदलिय बैठक बसेर आज विहान देखि मतगणना सुरु गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७९ शनिबार ००:०० ६ : ०३ बजे